Maitiro ekuvandudza yako e-commerce kuburikidza nekutaura nyaya? | ECommerce nhau
Maitiro ekuvandudza yako e-commerce kuburikidza nekutaura nyaya?
Pamwe isu takatarisana nechimwe chezvinhu zvinonyanya kuratidza mukushambadzira kwazvino kwedhijitari. Iyo ipfungwa nyowani yekutaura ngano iyo inoreva kune yakasarudzika nzira yekutaura nyaya uye iyo inobatsira mukugadzirwa kwemashiripiti mamiriro kuburikidza nenyaya. Asi kuti iko kushandiswa kwekutaura nyaya muecommerce kune zvirevo zvakasiyana zvakanyanya. Nekushandiswa seyambiro inonongedza kubatana nevatengi nevashandisi nechinangwa chekutanga chekuvasvikira nemameseji aunoda kuvhura kuburikidza neiyi nyowani yekushambadzira sisitimu.
Chero zvazvingaitika, iri yehunyanzvi hwazvino hunyanzvi iyo ine yakakosha yekupinda mukana mune yedhijitari yekutengesa chikamu. Kwete chete yezvipo zvavo zvitsva asi nekujekesa uko meseji inosvika kune chimwe chikamu cheichi chiitiko. Ichokwadi kuti kuitiswa kwayo kwakati wandei kuomarara, asi kana iwe uchinzwisisa mashandiro ayo ekuita, hapana mubvunzo kuti inogona kugadzirisa yako yekutengesa zvemagetsi kubva ikozvino.
Pfungwa inoburitswa murondedzero yakanyatsotsanangurwa: chimwe chinhu chakareruka pakutanga pekutarisa sekusangana nekubatana pamoyo kuburikidza nenyaya kana nyaya. Zvekuti nenzira iyi, zvinhu zviviri zvakakosha kwazvo mubazi rezvokutengeserana zvakasanganiswa, senge zvine musoro uye zvisikwa. Mhedzisiro yaro inogona kutora chinguva kuti usvike kuchitoro chako chepamhepo, asi zvirokwazvo ichakushamisa iwe nezvayo zvakanaka zvirevo zvekuti kutaura ngano kune muecommerce. Nekuti imwe yezvinangwa zvaro zvakajeka ndeyekuziva vatengi kana vashandisi uye izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nenyaya inosvika kune vateereri.
1 Zvikonzero zvekushandisa kutaura ngano muecommerce
2 Mipiro yeaya manejimendi system
3 Kutaurira nyaya kunokupa chii?
Zvikonzero zvekushandisa kutaura ngano muecommerce
Pane zvikonzero zvishoma nei tichigona kusarudza zano iri mukushambadzira kwemazuva ano. Iwo akavakirwa pamusoro pezvose mukugadzira hwakanyanya kana hushoma hukama hukama nemutengi kana mushandisi. Saka kuti nenzira iyi, isu tiri mumamiriro akakwana kupinza hunhu hwechiratidzo chekutengesa kune vanhu ava. Kunyangwe kuti zvinhu zvese zvikure nenzira kwayo hakuzove nesarudzo asi kusarudza nyaya kana nyaya inoratidzira uye inofarira chimwe chikamu cheichi chiitiko.
Nekuti hazvizo batsira kana iyo nyaya iri bland, kusava nehanya kana nezvisina kujeka zvemukati. Kana zvisiri, pane kudaro, vashandisi vanofanirwa kukochekera kuti vagadzire iyo link kubva kune iyo yemagetsi commerce inogona kusimbiswa. Izvo zvinodikanwa kuti ipe zviyero zvakabatana zvakanyanya kune izvo zvechikamu chatiri kuita: matekinoroji, mbatya dzemitambo, zororo, nezvimwe.
Izvo hazvigone kukanganikwa kuti imwe yekiyi mukutaura ngano ndeyekutengesa yakawanda. Zvinenge zvisina basa kana zvigadzirwa zvedu kana masevhisi asina kushambadzirwa kana tikashandisa nyaya isingagutsikane. Mupfungwa iyi, chimwe chezviratidzo zvekuzivikanwa kweiyi tekinoroji inosimudzira izvo zvirimo kune chimwe chinhu chakanyanya kushushikana kupfuura zvino. Kuburikidza nezviito zvakasiyana zvatinogona kukudziridza kubva panguva dzino:
Gadzira imwe nyaya inonakidza uye tora mamwe maitiro kune chimwe chikamu cheichi chiitiko.
Inofanira kunge iri nyaya inosvika mutengi manzwiro uye izvo zvinovabatsira kuti vaone mucherechedzo nehumwe nyore.
Kusiyana nemamwe mamodheru ekutungamira, mune ino, iyo kudyidzana. Ndokunge, inopa rumwe ruzivo rwunopihwa nezvimwe zvitoro chaizvo.
Inotendera a kuenderera mberi nekugadzirisa izvo zvinogadzira kuti mutengi anonzwa kugadzikana nezvigadzirwa zvedu, masevhisi kana zvinyorwa.
Batanidza vamwe mukuda kwako ku tora kufarira chiziviso uye mukufamba kwenguva inogadzira mubatanidzwa wakatsiga uyo unobatsira kuvandudza kutengesa mune ese magariro.
Iyo manejimendi fomati iri kuvhura mazano matsva uye neiyi pfungwa hapana mubvunzo kuti inogona kubatsira kuputsa zvimwe zvisaririra.
Kugadzirirwa kwechirongwa chinogona kubatsira zvakanyanya mu tsigira nharaunda dzakatadziswa, masangano kana mamwe marudzi emapoka enzanga.
Inokurudzira vashandisi tora chinzvimbo chinoshanda zvakanyanya muhukama nekutengeserana kwemagetsi. Zvekuti nenzira iyi, ivo ndivo vanotsanangudza zvavo nyaya nezvikonzero zvinogona kunyatso kukurudzira.
Uye pakupedzisira, isu hatigone kukanganwa kuti nyaya yemhando idzi inogona kutungamira kune akanakisa mazano ekusimudzira nekuvandudza mhando yekutengesa.
Mipiro yeaya manejimendi system
Ehezve, kushandura izvo zvaunoda kuudza nyika ive nhoroondo hazvinetsi kuita. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kutenda mune zvaunoita uye unoda kugovana nhevedzano yemaitiro kune vamwe vanhu. Kuti uite izvi, zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa zvinofanirwa kupa padhuze uye kuona kuti vatengi vako, pavanongozviona, vanonzwa kuzivikanwa navo. Iyo meseji yaunotanga ichave yakakosha kuti iwe ugone kuzadzisa izvi zvinangwa mune rako rehunyanzvi chiitiko.
Nepo kune rumwe rutivi, imwe yekiyi dzebudiriro iri muchokwadi chekuti ichave yakanyatsodikanwa kuti mushandisi aite inzwa uchizivikanwa nenzira yako yekutarisira zvemagetsi zvekutengeserana. Kuti uite izvi, unofanirwa kuvaita kuti vatore chikamu mumitengo inomiririrwa nekambani yako diki kana yepakati. Uye zvakare, ndiyo yepakutanga uye nzira yehunyanzvi yekuzvitsauranisa kubva pakupihwa kwemakwikwi. Kubudikidza nechigadzirwa chakasarudzika chinogona kuunza fungidziro uye pamusoro pese manzwiro pakati pevatengi.
Semuenzaniso, kuendesa huwandu hwevanhu vakabudirira vane hurema hwepfungwa avo, kunyangwe vachizivikanwa nekuda kwehunyanzvi hwavo neruzivo, vane matambudziko ekubatanidzwa muchikamu chinogadzira. Mupfungwa iyi, zvichave zvakakosha kukosha kushandisa zvido zvakasiyana, mararamiro uye kunyangwe manzwi akasiyana kugadzira iyi nharaunda yakanaka kune vanhu ava. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kugadzira runyorwa nyowani rwevatengi kuburikidza neshoko senge remanzwiro seichi.
Kune rimwe divi, usakanganwa kuti kutaura nyaya chikamu chekushambadzira zvemukati shure kwezvose. Kune vakanaka nevasina kunaka uye neiyi pfungwa unogona kugovana nyaya dzako kana nyaya kuburikidza nenzira dzakasiyana mukutaurirana.
Kana iwe uchida kuisa zano iri mukushambadzira kwedhijitari iwe unogona kushandisa zvakasiyana zvinotsigira mune zvirimo Zvimwe zviri muchimiro zvinyorwa, odhiyo kana vhidhiyo uye zvinoenderana nekuonekwa kukuru uko kunogona kugadzirwa kuti utange meseji iwe yaunoda kutepfenyura kubva zvino zvichienda mberi.
Usakanganwa kuti pakupedzisira izvo zvaunoita kutengesa chigadzirwa kana sevhisi uye chinhu ichi chinoda kutonyanya kukurudzira mune meseji iwe yaunoda kusvika kune vatengi kana vashandisi. Kana iwe ukapinda mune iri basa, hazvizokubhadhare iwe kuyedza kukuru kuti uone iyo inokurudzirwa nzira dzekutaurirana.
Kana iwe uchida kuziva kuti nei kutaura nyaya iri iyo kiyi chidimbu kuti usvike kune vatengi, iwe unofanirwa kungo gadzira inoratidzira nyaya uye kana zvichibvira iyo izere nemanzwiro. Nerombo rakanaka, kubudirira kunovimbiswa.
Kutaurira nyaya kunokupa chii?
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuongorora kuti ino manejimendi system yakarongedzwa senge zano rinoshandiswa zvakanyanya mukushambadzira kwetsika. Asi shanduko dzese uye zvimwe munyika yekutengesa uye nekuda kweichi chikonzero chave kuziva nzira yekuenderana nezvinodiwa zvepamhepo svikiro. Uine mukana wekuti iwe unogona kutora zvinotevera zvipo zvatinokufumura pazasi:
Inogadzira izvo yako yekutengesa meseji pinda nesimba rakawandisa mune dzimwe nzvimbo dzekutaurirana uye izvi zvinokubatsira kuti uzive zviri nani pakati pevangangove vatengi.
Ongorora chokwadi chekuti vatengi havawanzotenga sevhisi kana chigadzirwa. Muchikamu chakanaka chenguva dzavanogona kuve kukurudzirwa nemanzwiro izvo zvinoita kuti vanzwe brand yako. Usapotsa mukana wekunze zano iri mune yako yepakati dijitari.
Chero zvazvingaitika, unogona kudzidza akateedzana e zivo izvo zvinouya zvinobatsira kune rako bhizinesi chiitiko. Semuenzaniso, ivo vanopa chidzidzo chehupenyu kana kuratidzwa kuchazonyanya kukosha mukushanduka kwavo.
Ivo vanobatana neakanyanya kurongeka pfungwa sezviri pachena senge kufungidzira uye kurudziron. Vashandise kubatsirwa nekutengeserana kwako kwedhijitari kubva zvino zvichienda mberi uye hauzombozvidemba.
Dzidza kugadzira kuvimba mamiriro ekunze kuburikidza nezviitiko zvawakave nazvo muhupenyu hwako.
Kubva panguva yekutanga ichakubatsira iwe kukunda zvipingamupinyi zvaunazvo kubva pakagadzirwa chitoro chako chepamhepo. Nekutsungirira iwe unozogona kuzadzisa zvinangwa zvawakazvigadzirira iwe pachako kubva pakutanga.
Icho chishandiso chine simba chinoita kuti iwe ubatanidze nacho batanidza nevashandisi vako neshoko rauri kutumira. Pasina kurega kushandiswa kwemamwe marongero mukushambadzira kwedhijitari.
Iwe unogona kuita kunzwa yakakosha kune vanogamuchira iwo mameseji uye kusvika padanho rekuti ivo vanogona kupinda muchinzvimbo chevatsigiri. Saka kubatanidzwa mune yako yekutengesa mhando kuchave kwakanyanya kusimba kupfuura kusvika zvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekuvandudza yako e-commerce kuburikidza nekutaura nyaya?
Chii chinonzi gamification uye ndeapi mabhenefiti mune yemagetsi commerce?